Hvm Marovoay : Ampifandraisina ny politika fampandrosoana sy ny filan’ny mponina -
AccueilRaharaham-pirenenaHvm Marovoay : Ampifandraisina ny politika fampandrosoana sy ny filan’ny mponina
Manohy hatrany ny fifampiarahabana tratry ny taona ny antoko HVM. Taorian’ny tany Mahajanga, ny vahoakan’i Marovoay indray no nandray izany lanonan’ny asaramanitra izany ny sabotsy lasa teo, ary nisolo tena ny filoha mpanorina ny antoko HVM, Hery Rajaonarimampianina sady filoham-pirenena sy ny filoha Nasionalin’ny antoko, sady filohan’ny antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao, ny minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, Harry Laurent Rahajason, izay sady mpiahy ihany koa ny faritr’i Boeny. Nisongadina tamin’ny fandraisam-pitenenana fa ho an’ny atoko Hvm dia mila ampifandraisina ny politika fampandrosoana sy ny filan’ny mponina. Anisan’ny tafiditra tamin’ny fijerena izany lafiny izany ny fihaonany tamin’ireo ben’ny tanàna 13 mandrafitra ny distrikan’i Marovoay, nahalalana sy namoaboasana ny fiainan’ny mponina.
Nasongadin’ny minisitra tamin’izany fihaonana izany ihany koa fa hanomboka ny volana mey ho avy izao ny fanamboarana ny làlana ao Marovay mba ahafahana mamoaka ny vokatra sy hanamorana ny fivezivezen’ny mponina. Ny Minisitra mpiahy ny faritra Boeny, izay tompon’antoka tamin’ny fikarakarana izany fetin’ny Asaramanitra tao Marovoay izany.
Nandritra ny hetsika, dia nahaliana ny vahoakan’i Marovoay, tonga maro nanohana ny antso ihany koa ny vina sy ny tetikasan’ny antoko HVM any amin’iny faritra iny. Hita soritra teny amin’ny endrik’izy ireo ny faniriana te hahalala misimisy momba izany.
Tsy hohadinoin’ny minisitra Harry Laurent Rahajason ny nampita ny hafatra avy amin’ny filoha mpanorina sy ny filoha nasionaly, izay tsy afaka tonga tany an-toerana noho ny raharaham-pirenena tsy maintsy sahanin’izy ireo. “Mila firaisankina, mila fifanomezan-tanana, ary mila fifanohanana ny fampandrosoana ny Firenena” araka ny lahateny nentiny. “Mbola fotoana natokana hanaovana fety aloha androany fa ho avy ny fotoana hanaovana asa tana-maro sy ny asa sosialy isan-karazany hanomezana asa ho an’ny tanora sy ny mponina eto Marovoay no sady hampivoarana ny fari-piainan’ny tsirairay », hoy ihany izy.